Abavelisi beMveliso kunye nababoneleli | Umzi mveliso wase China
Inkcazo: ● I-Abor enye ingena kuzo zonke iisarha zomngxunya 1-1 / 4 in. Kwaye inkulu. ● Inkqubo ye-mandrel yokutshixa yotshintsho olukhawulezayo nolulula ngaphandle kwexesha le-Arbor shank Ubungakanani be-7/16 intshi yesicelo: ● Ukusebenza ngaphandle kwesixhobo. Indalo iphela, ilingana nayo yonke i-5/8 ″ okanye i-1/2 ″ emingxunya emngxunyeni. Indlela yokusebenza: Ukupakisha: Ikhadi lombala kunye neblister Bulk
Inkcazo: ● Ifanela iiHole Saws 1-1 / 4-In. & Enkulu ● Ubungakanani be-Shank 7/16 in. Usebenza kanjani: (Ukukhupha ngokukhawuleza i-arbor VS yemveli)
Womsebenzi wobuyiselo wabona blade
Ingcaciso: . Isicelo: ● Amatye abuyisayo asetyenziselwa ukusika amatye, izitena, ibhloko kunye ne-stucco.